site na nchịkwa na 21-07-01
A na -atụ anya na ụlọ ọrụ ihe ngosi LED ga -eweta oge mweghachi arụmọrụ. Dabere na akụkọ ọhụrụ nke Trend Force, nzukọ nyocha ahịa, a na-atụ anya na uru mmepụta ihe ngosi LED ga-abawanye site na 13.5% kwa afọ ruo $ 6.27 ijeri na 2021. Dị ka onye nta akụkọ si kwuo ...
Kedu ihe e ji amata nnukwu ngosipụta LED?
1. Ihe ngosi LED nke dị n'èzí nwere ọtụtụ ngosipụta otu LED, yana pikselụ pikselụ buru ibu. Nkọwa ndị a na-ejikarị bụ P6, P8, P10, P16, wdg. E jiri ya tụnyere ihe ngosi ọkụ LED pere mpe, uru nke nnukwu oghere dị ọnụ ala. Ọnụ ego kwa square ...
site na nchịkwa na 20-02-27
Ụlọ ihe ngosi ihe nkiri Hong Kong Asia Asia
Aha ngosi ahia: Hong Kong Asia International Hall Hall ụbọchị gara: 2019 .10 Mba/mpaghara ndị ọbịa: HK Okwu Mmalite: Ọ dị mma nke ukwuu!